ရခိုင်အမျိူးသားခေါင်းဆောင် ဦးအေးသာအောင် > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / ရခိုင်အမျိူးသားခေါင်းဆောင် ဦးအေးသာအောင်
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ November 27, 2014 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 136 Views
၆ ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်အမျိူးသားပါတီ ခေါင်းဆောင်၊ ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိူးများမပာာမိတ် အဖွဲ့ (UNA ) သဘာပတိ အဖွဲ့ဝင် ဦးအေးသာအောင်နဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ညရ နာရီ အချိန်က IMNA သတင်းထောက် စောဇင်ညီက သီးသန့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
IMNA-အခု၆ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲကို ပြည်သူလွှတ်တော်က ဒီလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီ ၆ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲအပေါ် အန်ကယ်အနေနဲ့ ကြိုဆိုပါသလား ဘယ်လို သဘောရ ပါသလဲ?
UATA –အခု ၆ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို ယေဘူယျ အနေနဲ့တော့ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေက အကျပ်အတည်းတွေဖြစ်နေတယ်၊ ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံ ပြင်ဖိ့ုကလည်း မသေချာ မရေရာတဲ့ ပုံ ဖြစ်နေတယ်၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်စေချင်တာ ပြင်မှလည်း ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ဟိုဘက်မှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နိုင်မှာ၊ အခု လွှတ်တော်ထဲမှာ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဆွေးနွေးတာ အဓိကကျတဲ့ ပုဒ်မတွေ၊ တပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပုဒ်မတွေ မပြင်ဘူး၊ နဂိုလ်အတိုင်းထားဖို တင်ပြလာတယ်၊ အခု လွှတ်တော်ဥက္ကဌကလည်း ၂၀၁၅ အလွန်မှ ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ပြင်မယ်လိုပြောတယ်၊ ဆိုတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာပြင်ဖို့ ဆိုတာ မသေချာတော့ဘူး၊ ၂၀၁၅ ပာိုဘက်မှာလည်းဘဲ တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ မရှိရင် ပြင်ဖို့ မလွယ်ဘူး၊ နောက်တစ်ချက်က ပြီးခဲ့တဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ NCCTနဲ့ UPWC က အဆင်မပြေဘူး၊ ရပ်တန့်သွားတယ် ရပ်တန့်တယ်ဆိုတာထက် နောက်ကိုတောင် ပြန်ဆုတ်သွားတယ်၊ အဲလို နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ ၆ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကို လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်တယ် ဆိုတာကိုတော့ ယေဘူယျ သဘောကျတယ်၊ ကြိုဆိုတယ်၊ ဒါပေမယ့် စောစောက ပြောတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ တကယ့်တကယ် လေးလေးနက်နက် ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း အဖြေရှာနိုင်ပါ့မလား၊ အရင့်အရင် ဆွေနွေးပွဲတွေကလည်း မရေမရာ ပြီးဆုံးသွားတာတွေကို တွေ့ခဲ့ရပြီးပြီ၊ ဒီဆွေးနွေးပွဲကကော စောစောက ပြောတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာ အလေးအနက်ထားပြီး ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်း ဖြေရှင်းဖို့ အခြေခံ အချက်အလက်တွေ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ့မလား၊ စောင့်ကြည့်ရမယ့် သဘောရှိပါတယ်။
IMNA-အဲဒီ ၆ ပွင့်ဆိုင်မှာ ၅ ပွင့်က သမ္မတ၊ ကာချုပ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌနဲ့ အမျိူးသားလွတ်တော် ဥက္ကဌတွေ ပါ၀င်ပါတယ်၊ နောက်တစ်ပွင့်ကတော့ တိုင်းရင်းသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဘဲဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒါ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကကြည့်ရင် မျှတ မှုကော ရှိပါသလား။ အန်ကယ် ဒီကိစ္စကို ဘာလိုပြောချင်ပါသလဲ?
UATA-တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က တစ်ဦးဘဲပါမယ်။လွှတ်တော်ထဲကဘဲ ဆွေးနွေးခွင့်ရမယ်ဆိုတာကို အန်ကယ့် အနေနဲ့ သဘောမကျဘူး၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရင် ပြည်နယ် ရ ခု ရှိတယ်၊ ပြည်နယ် ၁ ခုက တစ်ယောက်စီပါသင့်တယ်၊ အဲဒီတော့ ရ ယောက်ပေါ့ ။ အဲလို ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ပိုးပြီးတော့ အဆင်ပြေမယ်၊ ပိုပြီးတော့ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်စုံမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
IMNA-အဲဒီ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ကိုတော့ ရွေးချယ်ပါမယ်၊ ဒီကိုယ်စားလှယ်ကို ရွေးချယ်ရင် အန်ကယ့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုအချက်တွေကြည့်ပြီး ရွေးချယ်သင့်တယ်ထင်ပါသလဲ၊ ဘယ်လို အရည်အချင်းမျိူးရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကို ရွေးချယ်စေချင်ပါသလဲ?
UATA-တစ်ယောက်တည်းပဲဆိုရင် ပာိုအရင်တည်းက တိုင်းရင်းသား ပြဿနာတွေကို အစဉ်တစိုက် ဆောင်ရွက်လာတဲ့သူပေါ့၊ အခုဆိုရင် ပာိုဘက်အပိုင်းမှာထားလိုက်၊ ပါတီတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ၈၈ ကနေ အခုအချိန်အထိ နှစ်ပေါင်း ၂၆ နှစ် တိုင်တိုင် တိုင်းရင်းသားအရေး တိုင်းရင်းသား အရေး တိုင်းရင်းသားကိစ္စတွေကို လက်တွေကော အပြောအရပါ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ရွေးသင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ဆိုတာထက်တော့ ပိုစေချင်တယ်၊ လွှတ်တော်က ဆိုတာလိုတောင်မဖြစ်သင့်ဘူး၊ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေထဲက ပါသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို တစ်ဦးမက ရွေးသင့်တယ်။ရွေးတဲ့ခေါင်းဆောင်က လည်း တိုင်ရင်းသားအရေးကို သေသေချာချာ သိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးသင့်တယ်၊ ရွေးတဲ့ အထဲမှာလည်း ၂၆ နှစ်တိုင်တိုင် လုပ်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိူးကိုရွေးသင့်တယ်၊ အဲလိုဘဲ တိုင်းရင်းသား ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း လိုလားလိမ့်မယ်လို ထင်ပါတယ်။
IMNA-၆ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲကိုကော တိုင်ရင်းသားတွေအားလုံး ဘက်က လက်ခံမယ်လိုအန်ကယ်အနေနဲ့ ယူဆပါသလား?
UATA -၆ ပွင့်ဆိုင်ထက်စာရင် တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က အရေအတွက်ပိုပြီးတော့ များစေချင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ တိုင်ရင်းသားလူမျိူးတွေ နေထိုင်တာ ရ ပြည်နယ်ရှိတယ်၊ ဆိုတော့ ဒီပြဿနာတွေ အားလုံးကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် တစ်ဦးထပ်မက ပါသင့်တယ်၊ နောက်တစ်ချက်က တကယ်ဘဲ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့လိုမယ်၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားပြဿနာတွေကိုပါ ဖြေရှင်းဖို့ လိုမယ်လို့ ပြောချင်တယ်။
IMNA-ဒီလို တိုင်းရင်းသားဘက်က တစ်ပွင့်ဘဲ ပါ၀င်ခွင်ရတဲ့ အတွက် ဘယ်လိုအားနည်းချက် အားသာချက် တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လဲ?
UATA– ဥပမာပေါ့လေ ရှမ်းတို့ ကချင်တို့ ဘက်ကလည်း သွားချင်မယ်၊ ရခိုင်ဘက်က လည်း သွားချင်မယ်၊ ဒီတစ်ပွင့်ဘဲ ဆိုတာဟာ ဒီတစ်ပွင့်ကဘဲ လူမျိူးအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတာထက်စာရင် ပြည်နယ်တစ်ခုက တစ်ယောက်စီဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိူးတွေကလည်း သဘောကျမယ်၊ ဆွေးနွေးပွဲက လည်း ပိုပြီးပြည်စုံမယ်။
IMNA-အရင် တစ်ခါ အန်ကယ်တို့ UNA အပါအဝင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အခြားအဖွဲ့တွေ သမ္မတတို့ ကာချုပ်တို့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ တို့နဲ့၁၄ ဦး တွေဆုံခဲ့ကြတယ်၊ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲက အောင်မြင်တယ်။ ရေရာတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အသံတွေ ကျွန်တော်တို့ သိပ်မကြားရဘူး၊ ဒီ ၆ ဖွဲ့တည်း ဆွေးနွေးပွဲကိုကော အန်ကယ်တို့ ဘယ်လိုမျိူး ဖြစ်စေချင်ပါသလဲ?
UATA– ပြီးခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ ၁၄ ဦးပါတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲပေါ့၊ အဲဒီမှာတော့ အန်ကယ်တို့ UNA က ဦးခွန်ထွန်းဦး ပါတယ်၊ သူက တော့ တင်ပြသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို အကုန်တင်ပြခဲ့တယ်လို့ UNA မှာလည်း အန်ကယ်တို့ကို ရှင်းပြတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ မတူဘူးလေ။ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က တင်ပြလာတဲ့ ကိစ္စတွေ အခြားဘက်တွေက တင်ပြလာတဲ့ကိစ္စတွေကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုမရှိတဲ့ပာာ မျိူးဆိုတော့ အားရကျေနပ်စရာ မရှိဘူး၊ အခု ဆွေးနွေးပွဲကတော့ အဲလို မဖြစ်သင့်ဘူး၊ အဲ့လိုဆွေးနွေးပွဲဆိုရင်တော့ ဘာမှထူးမှာမပာုတ်ဘူး၊ ဆွေးနွေးတဲ့ အခါ မှာ အားလုံးကလည်း လက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကို တင်ပြမယ်၊ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေကြမယ်၊ ဖလှယ်ကြမယ် ပြီးတော့ ဒီဟာ
တွေကို ဖြေရှင်းဖို့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါသင့်တယ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါသင့်တယ်၊ ဒါမှ လည်း ဆွေးနွေးပွဲက အောင်မြင်မယ်။
IMNA-အဲတော့ အန်ကယ် ပြီးခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲက လွှတ်တော်ပြင်ပက သူတွေ ပါခွင့်ရတယ်၊ အခုဆွေးနွေးပွဲကျတော့ လွှတ်တော်တွင်းက သူတွေဘဲ ပါခွင့်ရတယ်၊ ဒီတော့ အခုလုပ်မဲ့ ဆွေးနွေးပွဲက လွှတ်တော်ပြင်ပက တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပါခွင့်မရတဲ့ အတွက် ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်နိုင်လဲ?
UATA– ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံ ပြင်ရေးဘဲပြောမယ်၊ အနည်းစုက လွှတ်တော်ထဲက ပြင်ရေး၊ အများစုက လွှတ်တော်ပြင်ပက ပြင်ရေးကို ပြောနေကြတယ်၊ လွှတ်တော်ထဲမှာတော့ ပါတီ တစ်ချို့ ရှိတယ်၊ လွှတ်တော်ပြင်ပမှာက ပါတီတွေ အများကြီး ရှိတယ်၊ အန်ကယ်တို့လို UNA ပါတီတွေ ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားတဲ့ ပါတီတွေရှိတယ်၊ အဲတော့ လွှတ်တော်ပြင်ပ က ပါတီတွေပါသင့်တယ်လို့ပဲ ပြောချင်တယ်။
IMNA-ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်ကယ်၊ ဒါကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စပါ အန်ကယ်၊ အခုလောလောဆယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေက ရှေ့ကို မရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်၊ တိုင်းရင်းသားဒေသ တွေမှာလည်း တိုက်ပွဲတွေ ထပ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်၊ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီပွဲတက်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဘယ်လိုမျိူးဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်သင့်လဲ အန်ကယ်?
UATA-အခုကြားတာတော့လေ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ၆ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲလို့ ကြားတယ်၊ ကျွန်တော်ကတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရေးလည်းပါမယ်၊ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တိုင်ရင်းသားပြဿနာတွေကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမျိူးဖြစ်သင့်တယ်၊ တကယ်တော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာ ပြင်ရေးဆိုတာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေး ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး တိုင်ရင်းသားများနဲ့ သပာဇာတ ဖြစ်ပြီးတော့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒါတွေ အားလုံးကို ဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်သင့်တယ်၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက တော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရေးကို တိုင်းရင်းသား အရေးနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ အပစ်အခက်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ထိုးပွဲနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးသင့်တယ်၊ အထူးသဖြင့် တိုင်ရင်းသားများနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာ ၆၆ နှစ်ကျော်ပြီ၊ ဘာကြောင့် ပြည်တွင်းစစ်မရပ်တာလည်း၊ အဓိကကတော့ နိုင်ငံရေးပြဿနာ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ တန်းတူအခွင့် အရေးရဖို့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရဖို့နဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ထူထောင်ဖို့ ဆိုတဲ့ ပြဿနာဘဲ၊ ဒီပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းဘဲနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒီတော့ ဒီပြဿနာတွေကို အခြေခံကျကျ ဆွေးနွေးတင်ပြ သင့်တယ်လို့ ပြောချင်တယ်။
IMNA– ဒီ ၆ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲက ဘယ်လိုရလာဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာဖို့ မျှော်လင့်လဲ အန်ကယ်?
UATA– ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း မရေမရာနဲ့ ပြီးဆုံးသွားတယ်၊ ဒီ၆ ပွင့်ဆိုင်မှာတော့ စောစောက ပြောတဲ့ ပြဿနာတွေ အလေးအနက် ဆွေနွေးမယ်၊ ပြီးတော့ ဒါတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေချနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိူးပေါ့၊ ဒီပာာတွေ မပါဘူးဆိုရင်တော့ ဒီဆွေးနွေးပွဲပာာလည်း မရေမရာနဲ့ ပြီးဆုံးသွားမယ်၊ ဒါကြိုတင်ပြောတာမပာုတ်ပါဘူး၊ စောင့်ကြည့်ရမယ့် သဘောကို အန်ကယ်က ပြောချင်ပါတယ်။
IMNA– ဟုတ်ကဲ့ အန်ကယ်၊ ဒီပွဲက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဖို့ အဓိက ဦးတည်တဲ့ ပွဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် အာမခံချက်ရှိတဲ့ ပြင်ဖို့လိုတဲ့ ဥပဒေတွေက ဘယ်လိုဥပဒေ တွေဖြစ်မလဲ အန်ကယ်?
UATA– ဒီဖွဲ့စည်းပုံဟာ စစ်တပ်ကို မဏ္ဍိုင် ပြုပြီး အခြေခံကျကျ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေ ဆိုတော့ ပြင်စရာတွေ အများကြီးဘဲ၊ အဓိက ကတော့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ဥပဒေတွေ အများကြီးပါတယ်၊ တတ်နိုင်ရင်တော့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို အသစ်ပြန်ရေးဆွဲတာ အကောင်းဆုံးဘဲ၊ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံတဲ့ ဖက်ဒရယ်မူကို အခြေခံတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲတာ အကောင်းဆုံးဘဲ၊ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို တကယ်ပြင်ချင်သပဆိုရင် အများကြီး ပြင်ဖို့လိုတယ်၊ ပြည်နယ်တွေမှာ ကိုယ်တိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိရမယ်၊ ပြည်နယ်တွေကို ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အညီ ဥပဒေပြုအာဏာတွေပေးရမယ်၊ ပြီးတော့ ပြည်နယ်တွေမှာဘဲ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် အပြည့်အဝ ရှိရမယ်၊ ဒါတွေပါရမယ်။
IMNA– ဒါဆို အန်ကယ် ဖက်ဒရယ်မှုကို အခြေခံတဲ့ ဥပဒေဖြစ်လာအောင် ဒီဆွေးနွေးပွဲက ဘယ်လောက်အထိ ထိရောက်ပါမလဲ?
UATA-အခုကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က တစ်ဦးထက်မက များများပါနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါတွေကို တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ တင်ပြနိုင်မယ်၊ ဒါတွေကိုလည်း တစ်ဘက်မှာရှိတဲ့ လွှတ်တော်က ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အစိုးရ တပ်မတော်က အကြီးအကဲတွေက ဒါတွေကို စဉ်းစားညှိနှိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းရင်းသားတွေက အကျိုးရှိမယ်၊ ဒီလိုမပာုတ်ဘဲ တိုင်းရင်းသားတင်ပြချက်တွေကို အစိုးရ တပ်မတော် လွှတ်တော် အကြီးအကဲတွေက လစ်လျူရှုမယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ မသေချာ မရေရာနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိူးမှာဘဲ ဆက်ရှိနေဦးမယ်။
IMNA-တကယ်လို့ ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာ အခြေခံဥပဒေမပြင်နိုင်သေးရင် တိုင်းရင်းသားဒေသ တွေမှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
UATA-၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ ပြင်သင့်သလောက်ပြင်ရမယ်၊ ၂၀၁၅ ဟိုဘက်မှာလည်း ပြင်နိုင်သလောက် ပြင်ရမယ်၊ မပြင်ဘူးဆိုရင် ပြည်တွင်းစစ်ရပ်ဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ပြောဖို့တောင် ခက်လိမ့်မယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ အဓိက တိုက်ပွဲဝင်တာ နိုင်ငံရေးပြဿနာလေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ပြည်နယ်တွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရှိရမယ်၊ အမျိူးသား ပြည်နယ်များနဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဖို့ တိုက်ပွဲဝင်နေတာလေ၊ ဒါတွေကိုရဖို့ဆိုရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ဒါတွေပါအောင် ထည့်ရမယ်၊ မပြင်ဘူးဆိုရင်တော့ တိုင်းရင်းသားတွေက လက်ခံမှာမပာုတ်ဘူး၊ လက်မခံရင်ပြည်တွင်းစစ်ရပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒါဘဲပြောချင်ပါတယ်။
IMNA– အန်ကယ်အနေနဲ့ နောက်ထက်ကော ဘာများ ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာများ ရှိပါသလဲ?
IMNA-ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်ကယ်၊ အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လှိုင်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရ ရွှေမန်း၊ အမျိူးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တိုင်းရင်းသားအားလုံး ကိုယ်စား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးတို့ပါ၀င်တဲ့ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ၆ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ၆ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်ဖို့ တိုင်းရင်းသားများကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအဖြစ် ရခိုင််အမျိူးသားပါတီ ANP ဥက္ကဌ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်ကို တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဒီကနေ့ ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ-အယ်ဒီတာ)
Previous အခြေခံဥပဒေအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းရန် ၆ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်
Next လာမည့်ဒီဇင်ဘာတွင် အပစ်ရပ်ဆွေးနွေးပွဲ အပြီးသပ်နိုင်မည်ဟု MPC မျှော်လင့်